ICaribbean ifuna ukulungisa kabusha umonakalo odalwe ubugqila - i-AFRIKHEPRI
I-Caribbean ifuna isinxephezelo ngomonakalo obangelwa ubugqila
Ukulimala okubangelwa ubugqila
Usuke usabela "ICaribbean icela isinxephezelo semonakalo ..." Imizuzwana embalwa edlule
Amazwe angamalungu ayi-15 weCaribbean Community (CARICOM) afuna ngokusemthethweni ukubuyiselwa kuleli sonto ngomonakalo odalwe ubugqila, ikoloni nokuhweba ngezigqila, kubika i-AFP.
Kwethulwe yizifunda ezikhuluma isiNgisi esifundeni, okuyisinyathelo, esivunyiwe ngoMsombuluko, sihlose imibuso emithathu yakudala yobukoloni, i-United Kingdom, iFrance neNetherlands.
ISpain nePortugal ayithinteki njengoba amakoloni abo angaphambili ayiyona ingxenye yeCARICOM.
Ngokwesisekelo sokuthi ifa lobugqila liyaqhubeka nokuphazamisa ukuthuthukiswa kweCaribbean futhi lithinte abantu bakhona, iCARICOM ivume ngoMsombuluko ngoMsombuluko izimangalo ezenziwe yikhomishini yokubuyisa eyamiswa ngoJulayi odlule.
I-CARICOM idinga " ukuthobeka ngobuqotho nokusemthethweni kohulumeni baseYurophu", Ukukhanselwa kwesikweletu samazwe angamalungu aso kanye nokusungulwa kwezezimali" Uhlelo lokubuyisela Ukuvumela inzalo kaabantu base-Afrika abangaphezu kwezigidi eziyi-10 badingiswa»Ukubuyela empilweni, uma befisa, ezweni lakubo.
Ezinye izicelo zihlobene nokuvuselelwa komphakathi womdabu waseCaribbean, ukuthuthukiswa kwezinhlelo zezempilo zomphakathi kanye nokulwa nokungakwazi ukufunda nokubhala, kanye nokudluliswa kwezobuchwepheshe nolwazi.
"Ukuphindiselwa kobugqila kanye nekhulu leminyaka yobandlululo olwalandela kuze kube yiminyaka yo-1950 kwaba yisicelo esisemthethweni namuhla emiphakathini yaseCaribbean ngenxa yomonakalo oqhubekayo nokuhlupheka okuhambisana nobugebengu 'isintu esenziwe ngaphansi kobukoloni'kusho uSir Hilary Beckles, usihlalo wekhomishana yokubuyisela, esitatimendeni esakhishwe yi-British firm Leigh Day evikela leli cala.
Leli khabethe lathola isinxephezelo ngoJuni ngonyaka owedlule kubantu baseKenya abangaphezu kuka-5.200 1950 abaphathwa kabi futhi bahlukunyezwa ngesikhathi iMvukelo ihlubuka negunya laseBrithani nelaseKenya ngeminyaka yo-XNUMX.
Omunye wabamele kulo, iMaître Martyn Day, utshele abe-AFP ukuthi iCARICOM izobiza ingqungquthela yezizwe zonke lapho kuzobe kukhona ohulumeni baseDashi, abaseBrithani nabaseFrance ngosuku nendawo ezobe isachazwa. Ngokusho kwakhe, umhlangano onje "singavumela abathengi bethu ukuthi bahlole ngokushesha ukuthi izicelo zabo zithathwa ngokungathi sína yini".
Kepha yini inyunyana yase-Afrika elindele ukuyicela ngokusemthethweni ukuthi iphindisele ngomonakalo odalwe ubugqila?
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-221!
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-205!